PSJTV | साहित्यमा अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिकाे अलग अायामकाे खाँचाे
शुक्रबार, १८ साउन २०७५ पिएसजे साहित्य
मेराे याे छाेटाे लेख, साहित्यमा प्रयाेग गरिएकाे अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिप्रतिकाे संक्षिप्त अध्ययन हाे, खासगरि मैले अाफ्नाे याे लेख लैनसिँह बाङ्देलकाे लङ्गडाकाे साथी र पारिजातकाे ९ वटा उपन्यासहरुलाई अाधार मानि तयार पारेकाे छु।
मुख्य प्रश्न याे हाेकि, अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिलाई लेखनकाे केन्द्रमा अर्थात् नायक वा खलनायकमा किन राखिन्न? या त उनीहरुलाई प्रयाेग नै गरिन्न अथवा दया र पीडाकाे भागिदारकाे पात्रकाे रुपमा मात्र प्रयाेग गरिन्छ । यस लेखमार्फत् म अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिकाे पनि अरु सामान्य भनिएका मानिसहरुकाेजस्तै सामान्य जीवन हुन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छु।
मैले याे लेखमा अपाङ्ग वा अन्य यस्ता शब्द प्रयाेग नगरि अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्ति(अाशादु) पदावलीको प्रयाेग गरेकाे छु।
-अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिप्रतिकाे चलिअाएकाे साेच:
अाशादुप्रति अन्य सामान्य भनिएका समुहद्वारा सदा हेयकाे भाव राखिने गरिएकाे छ। चाहे यथार्थ जे हाेस् तर समाजबाट निर्मित यो एकाेहाेराे धारणा हाे। जसकारणले सदा उनीहरुलाई दयाकाे पात्रकाे रुपमा मात्र बुझिंदै अाइएको छ। वास्तवमा अाशादुहरु याे समाजमा अाफ्नाे अलग पहिचान र दायित्व निर्वाह गर्ने आधार पाउन चाहन्छन्। समाजकाे वृहत समुदाय शारीरिक वा मानसिक रुपमा कमजाेरहरुप्रति वेवास्ता गर्न रुचाउँछन्।
-अशक्तताप्रति बुझाइको भ्रम:
समाजले अशक्ततालाई अाफ्नै खुशी वा बुझाइअनुरुप अर्थ दिएकाे छ। जसले गर्दा अाशादु भएका व्यक्तिकाे पूरै जीवननै अशक्त वा कमजाेर हाे भनि चित्रण गर्ने गरिन्छ, जस्तै सामान्य जीवनका कामहरु गर्न नसक्ने वा उनीहरुले जिएकाे जीवनलाई असामान्य मान्ने भ्रमहरु प्रचलित छन् । समाजकाे ठूलाे हिस्साले यस्ताे धारणा राखेतापनि याे पूर्ण यथार्थ कुरा हैन। किनकि ईतर समूहले मानेजस्ताे अाशादु पूर्ण अशक्त हुँदैनन्। मानौं, काेही दृष्टिविहीन छ, ऊ देख्न नसके पनि साेच्न, कल्पना गर्न, गाउन वा बाेल्न सक्छ। त्यसैले कुनै पनि दृष्टिविहीनको केवल अाँखाले मात्र दृश्यकाे अस्तित्व अनुभव गर्न सक्दैन। साथै सेरेब्रल पाल्सी भएका कुनैपनि व्यक्तिलाई पूर्णरुपमा अशक्त हाे भनि घोषणा गर्न मिल्दैन किनकि उसभित्र पनि केही न केही जीवित कार्य गर्ने क्षमता निहित हुन्छ। उदाहरणकाेलागि अमेरिकी लेखक तथा चित्रकार कृष्टि ब्राउन जाे सेरेब्रल पाल्सीको शिकार थिए तर उनकाे कलालाई यसले राेक्न सकेन। यस्तै अर्का अशक्त व्यक्ति हुन् नेपाली लेखक झमक घिमिरे। उनीपनि ब्राउनकै राेगसँग जुध्न विवश छिन्। र यस्तै अर्का अङ्ग्रेजी साहित्यका कवि जाेन मिल्टनलाई पनि लिन सकिन्छ उनीसँगपनि संसार हेर्ने ज्याेति थिएन।
के सशक्त मानिएका व्यक्तिहरुमा सारा गुण हुन्छ र? अनि हुनैपर्छ भन्ने छ र? के ब्राउन, घिमिरे वा मिल्टनकाे जस्ताे क्षमता हुन्छ वा हुनै पर्छ र? उदाहरणकाे लागि सबल भनिएका समूहले फुटबल त खेल्न सक्लान् तर मेस्सीजस्तो नसक्लान् अनि दाैडन त सक्लान् तर युसेन बाेल्टजसरी दाैडिन त नसक्लान् नि। अनि सक्नैपर्छ भन्ने पनि त छैन। यस अर्थमा त उनीहरु पनि अशक्त ठहरिए नि हैन र? तसर्थ, यी सब कुराहरुलाई ध्यान दिइ हेर्दा अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्तिलाई हेय भावले हेर्नू वा उनीहरुलाई अशक्त मान्नु अन्याय हाे। त्यसैले उनीहरुलाई अशक्त, कमजाेर वा असहायजस्ता शब्दले सम्बाेधन नगरि अांशिक शारीरिक दुर्बल व्यक्ति(अाशादु) भन्नू पर्छ। अर्थात कसैकाे दृष्टि नहुँदैमा उसकाे पूरै जीवन सकिन्न, उसकाे केवल दृश्य अनुभूति गर्ने क्षमता रहन्न वा बाेली नअाउँदैमा काेही पूर्ण अशक्त हैन, उसकाे केवल अावाज मात्र अशक्त हाे। उनीहरुकाे पनि जीवनकाे छुट्टै अाधार हुन्छ।
यस लेखमा म अाशादुलाई साहित्यमा प्रयाेग गरिएकाे बारेमा थाेरै चर्चा गर्न चाहन्छु। याे समूहलाई या त साहित्यमा कुनै स्थान नै दिईन्न वा दिइएतापनि दु:खी र अपहेलित पात्रकाे रुपमा दिइन्छ। सामान्य अर्थमा कहिल्यै प्रयाेग गरिन्न। यसकालागि मैले लैनसिँह बाङ्देलकाे 'लङ्गडाको साथी'लाई लिएकाे छु। यसमा अाशादुलाई तिरष्कृत, एक्लो, दु:खी, गरिब, माग्ने अनि केटाकेटीहरुबाट सताइएको पात्रकाे रुपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ। उनकाे अाफ्नाे न घर छ, न खाना र राम्राे कपडानै अनि माया गर्ने न काेही अाफ्नानै छन्। उनकाे केवल साथी भनाैँ वा सारा अाफ्नाे भन्नुनै एउटा कुकुर छ। सारा मानव पात्रहरु उनीप्रति दया र कृपाकाे रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। अन्तमा उनकाे अर्थहीन मृत्यु हुन्छ। यस उपन्यासकाे उनी मुख्य पात्र त हुन् तर उनलाई एक अति दु:खी पात्रकाे रुप दिइएको छ। के उनी खुशी, परिवारले घेरिएकाे, सम्पत्तिले सम्पन्न र सम्मानपूर्वक बाँचिरहेकाे पात्रकाे रुपमा देखिन सक्थेनन् र? के अन्य सामान्य भनिएका व्यक्तिहरुकाे यस्ताे अवस्था हुन्न र?
यसरीनै म नेपाली साहित्यका पूज्य लेखक पारिजातकाे प्रसँग जाेड्न चाहन्छु। उनकाे प्रकाशित ९ वटा उपन्यासहरु छन्। उनी स्वयम् पनि अाशादु वर्गमानै पर्छिन् तर उनका यी कृतिहरुमा उनले कुनैपनि नायक वा खलनायकलाई यस रुपमा देखाउन सकेकी छैनन्। यसकाे खास कारण के हाे? डर, भ्रम वा समाजमा रहँदैको मानसिकताकाे उपज?
म यसकाे कारण समाजमा विद्यमान रहेकाे मानसिकतालाई मान्छु। त्यसैले बाङ्देल अनि पारिजातजस्ता लेखकले पनि अाशादुलाई कुनै सही स्थान दिन सकेनन्। त्यसैले त लङ्गडाकाे साथीका मुख्य पात्र पीडादायक मृत्यु स्विकार्न विवश हुन्छ। यसकाे बदलामा उनी समाजमा रहेकाे याे असमानताविरुद्ध लडेर अाफ्नाे उचित स्थान प्राप्त गरेकाे देखाउन सकिन्थ्याे। यस्तै पारिजातका उपन्यासहरुमा वर्ग संघर्ष देखाईएकाे छ (शिरिषकाे फूलबाहेक)। तर यहाँ कुनैपनि अाशादुलाई मुख्य पात्रकाे रुपमा देख्न सकिन्न। उनकाे उपन्यास पर्खालभित्र र बाहिरकै कुरा गराैँ, यसमा ज्वाला नामका मुख्य पात्र छन्। उनी संघर्षशील र निम्नवर्ग प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र त हुन् तर समाजले स्विकारेकाे सबल पात्र हुन्। के क्रान्ति गर्न शारीरिक तागतनै मुख्य अाधार हाे?
-नायककाे अर्थ र साहित्यमा अाशादुकाे प्रयाेग:
नायककाे अर्थ र प्रयाेगमा सामाजिक मिथक निर्माण गरिएकाे छ। अर्थात नायक हुन सुन्दर, बलियाे र शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनैपर्ने साेचले समाजमा जरा गाडेको छ। यसैकाे उपज हाे बाङ्देलकाे उपन्यासकाे मुख्य पात्र। अनि प्राय: साहित्यमा अाशादुलाई नायक र मुख्य पात्रकाे रुपमा देख्न नपाउनुमा पनि समाजले निर्माण गरिदिएकाे यही साेचलेनै तगाराे लगाएकाे छ।
पारिजातले लेख्नु भएका उपन्यासहरुमध्ये कुनै एकमा उहाँले अाशादुलाई प्रयाेग गर्न सक्नुहुन्थ्याे नि तर त्यस्ताे केही भएकाे छैन। उहाँले बाङ्देललेभन्दा राम्राेसंग अाशादुकाे भावनालाई बुझ्न सक्नुहुन्थ्याे अनि न्यायपूर्ण ढंगले यस्ता पात्रलाई उचित स्थान दिन सक्नुहुन्थ्याे। तर यस्ताे हुन सकेकाे छैन। यसकाे मुख्य कारण के हाे त? के समाजले बनाईदिएकाे मिथकनै हाे?
मेराे प्रश्न छ, नायक बन्नुकाे मुख्य अाधार के हाे? के समाजले मानेकाे सबल व्यक्तिनै हुनुपर्छ वा हर्कुलसजस्ताे सर्वशक्तिमाननै हुनुपर्छ? के अाशादु कुनैपनि लेखनमा नायक वा मुख्य पात्र बन्न (बाङ्देलकाे पात्रजस्ताे हैन) नहुनेनै हाे त?
वास्तवमा नायक त सामान्य व्यक्ति (जाेपनि, अाशादुपनि) हाे जाे अाफ्नाे शक्तिशाली साेचले अति महान् मानिएका कार्य गर्न सफल हुन्छ। यस्तै खलनायकपनि अाफ्नाे कर्मले बन्ने हाे। तसर्थ अाशादुपनि साहित्यिक लेखनमा नायक वा खलनायककाे रुपमा देखिनुपर्छ, अर्थात् उक्त पात्र बलात्कारी, दलाल, प्रेमी, व्यापारी, श्रमिक, विद्राेही वा स्वतन्त्रता सेनानी हुनसक्छन्। किनकी शारीरिक वा अन्य कुनै अाधारलाई कारण बनाइ कसैलाई (अाशादु) दया र हेयकाे रुपमामात्र चित्रण गर्नु अन्याय हाे।
अब यस साेचलाई परिवर्तन गर्ने उचित समय अाएकाे छ ।